China GS Super 10 Micron Polyolefin Shrink Film orinasa mpamokatra sy mpanamboatra | GS PACK
GS Standard Polyolefin (POF) 5-Layer Co-Extruded Heat Shrinkable Film avy amin'ny GS PACK, manana hazavana avo sy ambany density, Ity horonantsary mampihemotra ara-toekarena sy ara-toekarena ity dia manana fananana sakana tsara kokoa noho ny sarimihetsika 3-sosona mazava ho azy, Mandritra ny famonosana, dia miorina amin'ny biaxial izy io mihena amin'ny shrinkage milamina sy voalanjalanja (mihoatra ny 60%); fahamendrehana ambony, misy zoro malefaka sy famehezana hermetika, tsy marefo, fanoherana ny hafanana ambany, tsy manimba sy tsy maimbo, mando-porofo, izy io no mahasolo ny shrinkfilms PVC.
GS Standard Polyolefin (POF) 5-Layer Co-Extruded Heat Shrinkable Film avy amin'ny GS PACK, manana hazavana avo sy ambany density, Ity horonantsary mampihemotra ara-toekarena sy ara-toekarena ity dia manana fananana sakana tsara kokoa noho ny sarimihetsika 3-sosona mazava ho azy, Mandritra ny famonosana, dia miorina amin'ny biaxial izy io mihena amin'ny shrinkage milamina sy voalanjalanja (mihoatra ny 60%); fahamendrehana ambony, misy zoro malefaka sy famehezana hermetika, tsy marefo, fanoherana ny hafanana ambany, tsy manimba sy tsy maimbo, mando-porofo, izy io no mahasolo ny shrinkfilms PVC. Izy io dia afaka miaro ny vokatrao tsara amin'ny fisorohana ny fisehoan'ny vokatra avy amin'ny vovoka sy fofona hafahafa.
Ity no vokatra an-tsarimihetsika ara-toekarena mahazatra indrindra izay mifanentana amin'ny milina fanodinana mandeha ho azy sy semi-automatique Ity vokatra ity dia voamarina ihany koa tamin'ny American Standard Standard (FDA) ary nandalo manome fari-pitsipika mifandraika amin'izany.
Ny toetran'ny sarimihetsika polyester azo ovaina PET hafanana: miorina amin'ny maripanan'ny efitrano izy, mihena rehefa mafana (ambonin'ny mari-pana fiovana fitaratra), ary ny hafanana mihena mihoatra ny 70% amin'ny lafiny iray.
• Mangarahara ny hoditra ary hita taratra amin'ny sarin'ny vokatra.
• Hamafiso tsara ny fonosana, fanoherana tsara ny fanaparitahana.
• Fisorohana ny orana, ny hamandoana ary ny ahitra.
• Tsy misy fanarenana, miaraka amina lahasa fanohitra fanoherana sasany. Ny sarimihetsika polyester-hafanana mampihena hafanana dia matetika ampiasaina amin'ny sakafo mahamora, tsena fisotro, fitaovana elektronika ary vokatra vy. Manokana indrindra, ny fihenan'ny mari-pamantarana no faritra fampiharana lehibe indrindra. Satria amin'ny fivelarana haingana ny tavoahangy misy zava-pisotro PET, ny tavoahangy zava-pisotro toy ny cola, sprite, ary ny ranom-boankazo isan-karazany dia mitaky sarimihetsika mafana azo hafanaina PET mba ampifanarahana amin'ny labozia misy tombo-kase. Anisan'ny sokajy polyester izy ireo ary fitaovana azo ampiasaina amin'ny tontolo iainana izay mora amboarina. ampiasaina.
Ankoatry ny fampiasana azy ireo ho toy ny marika mampihena, ny sarimihetsika polyester azo hafanaina hafanana dia ampiasaina ihany koa amin'ny fonosana ivelany amin'ny entana isan'andro. Satria tsy afaka miaro ireo entana fonosana amin'ny hatairana, orana, hamandoana ary harafesina ihany izy io, fa mahatonga ny vokatra hahazo ny mpampiasa amin'ny fonosana ivelany vita pirinty tsara tarehy, ary afaka mampiseho tsara ny endrik'ilay mpanamboatra. Amin'izao fotoana izao, mihamaro ny mpanamboatra fonosana mampiasa sarimihetsika mihemotra vita printy hanoloana ny sarimihetsika mangarahara nentim-paharazana. Satria ny sary mihetsika mihena dia afaka manatsara ny fisehoan'ny vokatra, izy io dia mahasoa amin'ny fanaovana doka ny vokatra, ary ny marika famantarana dia mety hisy fiheverana lalina ao am-pon'ny mpanjifa.
hateviny Micron ASTM-D 374 10um
hakitroky g / cm3 ASTM-D 1505 0,92
Faharetana amin'ny sintona N / mm2 ASTM-D 882 MD 115
Fanoherana ny ranomaso N ASTM-D 1938 MD 3.5
Tombo-kase N / 15mm Q BT 23-58 10
Diameter anatiny santimetatra 3
Manaraka: Fantsom-pamokarana mangarahara Polyolefin POF hafanana miolakolaka fonosana horonantsary
Sarimihetsika mafimafy Polyolefin Shrink
Fandrefesana sarimihetsika Polyolefin Shrink
Sarimihetsika Polyolefin Shrink In Usa
Sarimihetsika GS Standard Polyolefin Shrink
Famonosana Polyolefin Pof Shrink, Sarimihetsika Polyolefin Pof Shrink, Temperature famonosana polyolefin, Mihena horonan-tsary horonan-tsary, Mitete Film Pvc, Horonan-tsarimihetsika Vs Shrink Wrap,